Jeôgrafian'ny Repoblikan'i Kôngô - Wikipedia
Jeôgrafian'ny Repoblikan'i Kôngô
Ny Repoblikan’ i Kôngô dia firenena ao Afrika Afovoany izay mifanefi-tany amin’ ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô ao atsimo sy ao atsinanana, amin’ i Angôla ao atsimo andrefana, amin’ i Gabôna ao andrefana ary amin’ i Kamerona ao avarara-andrefana. Manana morontsiraka amirefy 169 km amin’ ny Ranomasimbe Atlantika izy.
1 Ny tany sy ny loharanon-karena
1.1 Ny vohon’ ny tany sy ny rano
1.2 Ny toetany
1.3 Ny zavamaniry sy ny biby
1.4 Ny loharanon-karena voajanahary
2 Ny mponina sy ny fiarahamonina
2.1 Ny isan' ny mponina
3.3 Ny harena an-kibon’ ny tany sy ny taozava-baventy
3.4 Ny fifanakalozana
Ny tany sy ny loharanon-karena[hanova | hanova ny fango]
Ny vohon’ ny tany sy ny rano[hanova | hanova ny fango]
Ny Repoblikan’ i Kôngô dia manana velaran-tany mirefy 342 000 km². Ny faritra manatrika ny Ranomasimbe Atlantika dia tany lemaka iva sy fasehina izany mizotra mankany Cabinda, ahitana helodrano alofan-javamaniry lagona anirian’ ny ala honko, izay sarahin’ ny alanana mitomandavana sady be fasika amin’ ny ranomasina. Manaraka izany dia ao koa no ahitana ny faritr’ i Mayombe izay mikintoa-miakatra, manana haambo miovaova eo anelanelan’ ny 550 m sy 800 m eo ho eo, mirazotra amin’ ny morontsiraka, izay ipoiran’ ny renirano manakaiky ny morontsiraka. Ao atsinanana no ahitana an’ i Niari izay ny lohasaha lonaka manasaraka an’ i Mayombe amin’ ny tapany atsimon’ ireo tangorom-bohitr’ i Chaillu sy ny lembalemban’ i Koukouya izay mitohy mivarina mankany Gabôna sy miakatra mankeny amin’ ny tendrombohitra Lekete (izay mirefy 1 040 m).
Ao amin’ ny faritra afovoany no ahitana ny ireo lembalemba Bateke izay vakivakin’ ny ony Congo sy ny renirano maro ary iparitahan’ ny farihy madinika maro. Ny lempona kongôley ao avaratra dia lemaka midadasika manana haambo 200 m hatramin’ ny 300 m, vakivakin’ ireo renirano toa an’ i Oubangui, i Sangha, i Likouala ary i Alima izay mamatsy ny ony Congo. Ao amin’ ny tapany avaratra-atsinanana, eo anelanelan’ i Sangha sy Oubangui, dia misy ny ireo faritra matetika tratran’ ny tondra-drano amin’ ny fotoan’ ny orana.
Ny toetany[hanova | hanova ny fango]
Toetanim-pehibe na ambanim-pehibe no hita any amin’ ny faritra farany atsimo any amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô. Mafana sady mando izany toetany izany ka manorana mandritra ny fito volana (manomboka amin’ ny volana Oktobra ka tsy mifarana raha tsy any amin’ ny volana Avrily) ary maina eo anelanelan’ ny volana Jolay sy Aogositra. Ny sala-maripana dia 25 °C. Ao amin’ ny faritra avaratra izay andalovan’ ny fehiben-tany dia be orana mahatratra 2 000 mm isan-taona. Toraka izany koa ny eny amin’ ireo lembalemba Bateke. Ny ao amin’ ny lohasahan’ i Niari anefa tsy mahazo afa-tsy 1 200 mm isan-taona.
Ny zavamaniry sy ny biby[hanova | hanova ny fango]
Mandrakotra ny ampahany be amin’ ny lempona kôngôley ny ala mando am-pehibe. Izany ala izany dia mandrakotra saika ny antsasaky na ny roa ampahatelon' ny velaran-tanin’ ny Repoblikan’ i Kôngô sady loharanon-karena voajanahary lehibe, nefa ny alan’ i Chaillu ihany no voatrandraka satria akaiky ny lalambin’ i Gabôna. Ny hazo tena trandrahana dia ny ôkome, ny akazoa, ny limba, ary ny sapelia. Makitroka ny ala ao avaratra-andrefana sy ao atsimo-andrefana. Ny hivoka ahitana hazo maniry sy ny ala galeria dia midadasika any avaratra atsinanana.
Maro isan-karazany ny biby, ka isan’ izany ny antilôpa, ny jirafa, ny geparda, ny voay, ary ny vorona sy bibilava maro.
Ny loharanon-karena voajanahary[hanova | hanova ny fango]
Ny solitany no loharanin-karena an-kibon’ ny tany lehobe indrindra ao amin’ ny Repoblikan’i Kôngô izay firenena afrikana fahefatra amin’ ny famokarana solitany tamin’ ny taona 1982. Ny loharanon-karena hafa dia ny pôtasy, ny volamena, ny vy, ny firaka, ny varahina, ny fanitso ary ny manganezy.
Ny mponina sy ny fiarahamonina [hanova | hanova ny fango]
Ny isan' ny mponina[hanova | hanova ny fango]
Miisa 3 900 000 any ho any ny mponina ao amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô tamin’ ny taona 2008 (hakitroka: 11,4 mp/km2), fa 5 000 000 kosa izany tamn' ny taona 2018 (hakitroka: 13 mp/km2). Ao amin’ ny tapany atsimon’ ny Repoblikan’i Kôngô no ivangongoan’ ny mponina indrindra, dia ny faritra onenan’ ny Bakôngô. Tamin’ ny fiandohan’ ny taona 1990 dia 3 % ny taham-pitomboan’ny mponina isan-taona, ny taham-pahafatesan’ ny zaza dia 99 p 1000. Ny salam-pahelavelon’ ny mponina dia 51 taona.
Ny mponina ao amin’ny Repoblikan’ i Kôngô dia miteny banto. Ny lehibe indrindra amin’ ny foko ao dia ny Bakôngô (Bakongo) izay misy 45 %n’ ny mponina, monina eo anelanelan’ i Brazzaville sy ny alanana (moro-dranomasina). Ny Bateke (Batéké) izay mahatratra 20 %n’ ny mponina dia monina eny amin’ ireo lembalemba anelanelan’ i Brazzaville sy ny ala. Ny Mbôsy (Mboshi) izay mahatratra 10 %n’ ny mponina dia monina amin’ ny ala ao avaratra. Ny Sanga (Sangha) dia monina ao amin’ ny faritra misy ala ao avaratra eo anelanelan’ i Sangha sy i Oubangui izay ahitana koa Pigmea baka (Baka) vitsivitsy.
Ny antsasa-manilan’ ny mponina ao amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô dia monina an-tanàn-dehibe. Ny lehibe indrindra amin’ ireo tanàna ireo dia i Brazzaville, i Pointe-Noire (izay renivohitry ny taozava-baventy), i Loubomo (taloha nantsoina hoe Dolisien, seranan-tsambo lehibe indrindra ao amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô) ary i Nkayi. Tamin’ ny taona 1990 i Brazzaville dia misy mponina 760 300; i Pointe-Noire dia misy mponina 387 800; i Loubomo dia misy mponina miisa 62 100; ary i Nkayi dia misy mpoina miisa 40 100.
Ankapobeny[hanova | hanova ny fango]
Na dia manan-karena amin’ ny solitany an-dranomasina sy ny tanjaky ny seranan-tsambo izay ahafahany manala ny fitokana-monin’ ny Repoblikan’ i Afrika Afovoany sy i Tsady ary i Gabôna aza ny Repoblikan’ i Kôngô, ny toekaren’ ity firenena ity dia mbola mila fanarenana lehibe taorian’ ny taona maro nitantanan’ ny fanjakana ny toekarena sy nisian’ ny ady an-trano. Tamin’ ny taona 1994 dia anaiky ny hametraka ny paika fanitsiana ara-drafitra izay notohanan’ ny Tahirim-bola irasam-pirenena (Fonds monétaire internationale – FMI) sy ny Banky maneran-tany (Banque mondiale – BM). Ny faharetan’ ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampihenana 50 % ny sandan’ ny vola farantsa CFA dia isan’ ny nampihena tamin’ io taona io ihany ny PIB, izay niala avy amin’ ny 3 000 000 000 dôlara tamin’ ny taona 1993 mankany amin’ ny 1 780 000 000 dôlara tamin’ ny taona 1995; ny PIB isan’ olona dia nidina avy amin’ny 1 230 dôlara mankany amin’ ny 680 dôlara. Nihoatra ny 6 000 000 000 ny trosa ivelany tamin’ ny taona 1993.
Tamin’ ny fiantombohan’ ny taona 1995 dia niteraka fitokonan’ny mpiasam-panjakana ny fambaràna ny pôlitikan’ ny fitsitsiana izay nahakasika ny asam-panjakana indrindra. Na nihevitra aza ny BM sy ny FMI fa tsy nahazoana vokatra mahafa-po ny fanitsiana ara-drafitra, dia nandà ny hanome fanampiana ara-bola indray. Nokorontana izaitsizy ny Repoblikan’ i Kôngô vokatry ny ady an-trano izay nampandriaka ny ra tamin’ ny taona 1999.
Ny 30 %n’ ny mponina no misahana asam-pambolena izay miantoka ny 13 %n’ ny PIB. Ny fampbolena voly fihinana no tena sahanin’ ny olona: ny mangahazo (60 %n’ ny tany voavoly), ny vomanga, ny iniamy, ny katsaka, ny akondro, ny vary ary ny voanjo. Ny voly fanondrana dia ny palmie fanaova-menaka izay volena ao amin’ ny lempona kôngôley, ny fary, ny voanjo ary ny paraky eny amin’ ireo lembalemba Batéké, ny kafe, ny kakaô ary ny akondro. Ny fambolena natokana ho an’ ny raharaham-barotra tena miroborobo dia hita ao amin’ ny lohasaha lonak’ i Niari: ny fary sy ny vary ary ny voanjo. Ny fitrandrahana ny zava-misy anaty ala (ny hazo, ny kakaô, ny kafe, ny ny palmie fanaova-menaka, izay vokarina amin’ ny faritra misy ala) dia isan’ny manatevina ny vokatra fanondrana.
Ny harena an-kibon’ ny tany sy ny taozava-baventy[hanova | hanova ny fango]
Ny toerana misy solitany dia hita ao amin’ ny ranomasina ary ny solitany tsy voasa dia 90 %n’ ny vokatra aondrana any ivelany. Nahatratra 9 460 000 taonina izany tamin’ ny taona 1994. Nisy koa ny fahitna toerana vaovao misy solitany tao amin’ ny ranomasina manandrify an’ i Pointe-Noire, izay mety hahafahana mamokatra solitany mihoatra ny 15 000 000 taonina. Mitrandraka etona voajanahary sy firaka sy varahina ary volamena koa ny Repoblikan’ i Kôngô.
Ny taozava-baventy izay arovana tokoa, dia mitodika amin’ ny famokarana entana fandany (fanjifa). Ny orinasa mpanodina ny vokatry ny fambolena (mpamokatra menaka sy paraky) sy mpanodina ny vokatra avy any anaty ala (orinasa famakian-kazo sy mpanamboatra takela-kazo manify ary mpampilona ny hazo hahamafy sy hampaharitra azy). Mamokatra lamba, simenitra, kapa ary savony koa ny Repoblikan’ i Kôngô. Ahitana orinasa fisivanana sy fanadiovana solitany ny ao Pointe-Noire.
Ny fiharian-karena tsy manara-dalàna dia misahana ny 75 %n’ ny fifanakalozana ara-barotra, izay tsy tratran’ ny fandoavan-ketra.
Tamin’ ny taona 2000 dia tafakatra 930 000 000 dôlara ny fanafarana entana, ary ny fanondranana entana dia nahatratra 2 091 000 000 dôlara. Ny mpiara-miombona antoka lehibe amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô dia ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy ao Afrika Afovoany: i Kamerona sy ny Repoblikan’ i Afrika Afovoany ary i Gabôna. Mifandray ara-toekarena amin’ i Frantsa sy i Etazonia koa ny Repoblikan’ i Kôngô.
Ny ony Congo sy ireo renirano mivarina ao aminy dia ahafahana mifamoivoy sady miteraka tamba-jotra ara-barotra ho an’ ireo mponina manodidina azy. Mampitohy an’ i Brazzaville amin’ i Pointe-Noire ny lalamby Congo-Océan izay mirefy 510 km. Misy sampan’ ity lalamby ity izay mampitohy amin’ i Moanda (any Gabôna) izay mirefy 286 km sady ahafahana mamoaka ireo harena an-kibon’ ny tany avy ao amin’ ity faritra mitoka-monin’ i Gabôna ity. Ny arabe any amin’ ny faritra atsimo no tena betsaka, nefa vitsy amin’ izy ireo ny vita tara. Misy seranam-piaramanidina ny ao Brazzaville sy ny ao Pointe-Noire.
Ny farantsa CFA (franc CFA) no vola ampiasain’ ny Repoblikan’ i Kôngô. Tamin’ ny taona 2006 dia mitentina 655,95 F CFA ny iray Eorô.
Tantaran'ny Repoblikan'i Kôngô
Kolontsaina ao amin' ny Repoblikan'i Kôngô
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeôgrafian%27ny_Repoblikan%27i_Kôngô&oldid=1037943"
Voaova farany tamin'ny 16 Septambra 2021 amin'ny 10:34 ity pejy ity.